Vacuum ururiye, Electroplated taki qalajiyaha, Blades qalajiyaha - Yanjialong
taxane DW lakabka hal qalajiyaha suunka
Single saamayn evaporator daata
Single saamaynta isticmaalka evaporator daata: Qalabka Tani waa ku haboon yahay dawooyinka, noolaha, cuntada, kiimikada iyo warshadaha kale, oo waxaa badanaa loo isticmaalaa uumi of doodii dhaqanka Chinese daawo, Casiir furuto, xal kiimikada wanaagsan, iwm Maqaallo: a. Qaab dhismeedka Compact iyo meesha lagu tumo yar. Sax qiraan gudaha iyo dibadda qalabka, oo waafaqsan shuruudaha GMP. b. Qalabka ayaa waxaa inta badan ka kooban kululeeyaha, SEPARATOR ah, defoamer ah, condenser ah oo u eg. c ....
YZGFZG vacuum taxane qalajiyaha
YZG / FZG vacuum taxane qalajiyaha Hordhac: The wax-u qalajiyo vacuum waa in ay qalalaan wax ku hoos jira xaalad vacuum, iyo haddii bamka vacuum ah waxaa loo isticmaalaa ku listo iyo dehumidifying, heerka qalajiyo waxaa la dedejiyey. Fiiro gaar ah: Haddii condenser ah waxaa loo isticmaalaa, dareeraha ee wax la soo kabsaday karo by condenser ah; haddii biyo taxane bamka SK giraanta vacuum waxaa loo isticmaalaa, condenser la saaray karaa, lagu badbaadinayo maalgelinta tamarta. description wax soosaarka: YZG / FZG qalajiyaha vacuum taxane iska leh qalajiyaha vacuum ma guurto ah. dr The ...
Vacuum ururiye decompression
decompression Vacuum ururiye First, baaxadda codsiga qalab Tani waa ku haboon yahay fiirsashada ee dareeraha ah ee dawooyinka, cuntada, kiimikada iyo warshadaha kale, oo waxaa loo isticmaali karaa sida soo kabashada khamriga iyo fiirsato reflux fudud. qaybo The xiriir la qalabka la sameeyey bir, taas oo uu leeyahay iska caabin ah daxalka wanaagsan iyo heerarka GMP. Second, oo sideeda oo qalabka qalabka waxaa inta badan ka kooban oo jidhka ah taangiga fiirsashada ugu weyn, uumiga-dareere ah ...
ururiye saamayn Double
ururiye saamayn Double First, baaxadda codsiga ururiye The haboon fiirsashada oo cabitaanno ah sida daawo-dhaqameed Chinese, daawo galbeedka, glucose, istaarijka, glutamate monosodium, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, kiimikooyinka, iwm waa, iyo gaar ahaan ku haboon heerkulka hooseeyo fiirsashada vacuum kulaylka qalabka xasaasi ah. Ka dib markii xisaabinta si taxaddar leh iyo design taxadir, Shirkadda leedahay faa'iidooyin badan muuqaalada asalka ah. Second, ka kooban qalabka The double-saamaynta ...
ururiye Saddex-saamayn First, baaxadda codsiga ururiye The haboon fiirsashada oo cabitaanno ah sida daawo-dhaqameed Chinese, daawo galbeedka, glucose, istaarijka, glutamate monosodium, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, kiimikooyinka, iwm waa, iyo gaar ahaan ku haboon vacuum heerkulka hooseeyo fiirsashada kulaylka qalabka xasaasi ah. Ka dib markii xisaabinta si taxaddar leh iyo design taxadir, Shirkadda leedahay faa'iidooyin badan muuqaalada asalka ah. Second, ka kooban qalabka saddex Saamaynta c ku ...
ururiye goobaabin First, baaxadda codsiga qalab Tani waa ku haboon yahay fiirsashada ee dareeraha ah ee dawooyinka, cuntada, kiimikada iyo warshadaha kale, oo waxaa loo isticmaali karaa sida soo kabashada khamriga iyo fiirsato reflux fudud. qaybo The xiriir la qalabka la sameeyey bir, taas oo uu leeyahay iska caabin ah daxalka wanaagsan iyo heerarka GMP. Second, oo sideeda oo qalabka qalabka waxaa inta badan ka kooban oo jirka ka weyn ee taangiga uruuray, SEPARATOR uumiga-dareere ah, ...
Gariiradda vacuum ururiye
Gariiradda ururiye vacuum First, baaxadda codsiga Qalabka wuxuu ku haboon yahay fiirsashada ee qalabka dareeraha ah waa sida daawo-dhaqameed Chinese, daawo galbeedka, cuntada, glutamate monosodium, caanaha, glucose, istaarijka, juice, kiimikada iyo sida. Second, oo sideeda oo qalabka qalabka The waa qalab cylindrical quwad leh jaakada ningax kaamerada, kaas oo la jwaano la fudud a iyo ejector Haydarooliga hufan. Qalabka wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood, chambe uumi ...
Khamriga kabashada ururiye
Khamriga ururiye kabashada First, baaxadda codsiga qalabka Tani waxay ku haboon dawooyinka, noolaha, cuntada, kiimikada iyo warshadaha kale. Waxaa inta badan loo isticmaalaa for uumi of doodii daawo Chinese dhaqanka, xal kiimikada wanaagsan, iwm Waa gaar ahaan ku haboon uumi iyo soo kabashada dareeraha organic. Second, oo sideeda oo qalabka qalabka waxaa inta badan ka kooban kululeeyaha, evaporator ah, defoamer ah, condenser a double, meeldhexaadka ah, aqbaliddoodii a dareere ta ...
Mabaadii'da shaqada ee uumi-baxayaasha saddexda ah ee biyaha wasaqda badan leh ee cusbada
Uumi bixiyaha saddexda ah waa nooc ka mid ah qalabka soo saarista iyo fiirsashada, kaas oo si ballaaran loogu adeegsado uumiga iyo geeddi-socodka u fiirsashada qalabka dareeraha sida dawooyinka, kiimikooyinka, cuntada, iyo warshadaha nalka. Waqtiga kululaynta jirka waa gaaban yahay, xawaaraha uumi baxa waa dhakhso, t ...
Suuqa silsiladda oksijiinta iyo isku-urursiga ayaa markhaati ka noqon doona koritaanka ugu sarreeya adduunka ee sannadka 2019-2025
Rajada suuqa ee hawo-gacmeedyada oksijiinnada iyo uruuriyayaasha, falanqaynta dhammaystiran iyo qaybaha suuqyada waaweyn iyo saadaasha, 2019-2025. Oxygen dhululubada iyo warbixinada suuqa uruurinta waa ilo qiimo leh oo xog loogu talagalay istiraatiijiyad ganacsi. Waxay bixisaa falanqeyn ku saabsan koritaanka suuqa ee warshadaha ...
Falanqaynta iyo isbarbar dhigga faa iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka uumi bixiyeyaasha filimku dhacayo
Uumi baxa uumiyaha filimku waa nooc ka mid ah qalabka uumi baxa waxsoosaarka sarreeya, kaas oo si wada jir ah loogu yeero uumibaxa filim khafiif ah oo ay weheliso uumibayaasha filimka soo kacaya iyo uumiyaha filimka la xoqay. Uumeeyeyaasha filinka khafiifka ah waxay leeyihiin faa'iidooyin muhiim ah waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa kiimikada, warshadaha fudud iyo foo ...
Mabda'a uumi bixiye ku-wareegga qasabka ah
Uumi bixiye wareegga qasabka ah waa uumi bixiye ku tiirsan awoodda dibedda ee wareegga. Uumiyaha wareejiya qasabka ee qasabka ah wuxuu ku habboon yahay uumiga kansarka, wasakhda, feejignaanta sare, nafwaayaha sare, iyo biyaha qashinka aan la milmi karin iyo dareeraha qashinka. xoogga saar. ...
Jiritaanka iyo himilada uumi-baxayaasha MVR
Uumi-baxaha MVR waa nooc cusub oo ku-ool ah iyo qalab uumi-baxa uumi-baxa uumiga oo inta badan loo isticmaalo warshadaha dawooyinka. Qalabku wuxuu adeegsadaa tiknoolajiyada uumiga iyo cadaadiska hooseeya iyo tamar nadiif ah si loo soo saaro uumiga tamar ahaan si loo kala saaro biyaha dhexdhexaadka ah. Waa ...
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2022: Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - amp Mobile
Single Saamaynta Vacuum ururiye, Single Lakabka mesh Belt qalajiyaha, Double Saamaynta ururiye, Single Saamaynta ururiye,
Nihe Zhenglu Town, ChangzhouCity, Jiangsu